(Kugcine ukubuyekezwa On: 17/04/2020)
Ake siqale lapho sincoma ukuthi uye khona ngaphambi kokuthi sikunikeze okwethu Backpacking amathiphu ehamba izitimela.
Lolu hlelo lokusebenza quality zonke izimiso isitimela ungene efonini yakho ukuze ukwazi ukufinyelela kuzo ku-intanethi futhi kubalulekile ngoba amathiphu akho ojosaka! Kulungele ukuhlela uhambo lwakho ngenkathi usohambeni futhi ujabulele isikhathi sakho okusha, indawo yangaphandle. Futhi, uhlelo lokusebenza ikuvumela ukuba ukuhlunga izinketho zakho wesitimela kuzixhumanisi ngqo kuphela, izitimela ngaphandle ukubhuka ayimpoqo, futhi siqeqesha nge ukuthutha ibhayisikili. Nakuba thina ngeke basikisela ukuthatha ibhayisekili uhambo ojosaka!
Ukuthola isipiliyoni esihle kakhulu sesitimela lapho ubhaka ubhaka, ngamanani kumnandi futhi ngaphandle izimali yokubhuka, ukusetshenziswa Londoloza Isitimela, futhi ungakhohlwa ukuphrinta yethu ngamathiphu okuhamba ojosaka ngaphambi ukuqeqesha travel.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-backpacking-tips%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#Ukubuyisela ubhaka emuva #Amathiphu we-Backpacking europeantravel europetravel longtrainjourneys amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela